Hospital Yiling waa isbitaalka dhamaystiran ee Shiinaha. In 1992, isbitaalka lahaa in ka badan 700 dhakhtarrada iyo kalkaaliyayaasha caafimaadku. 1000 sariiraha waa lagu qanci karo. Waxaan bixinaa daaweynta cudurada ugu.
Our isbitaalka waa heerka ugu sareeya ee isbitaalada daawo Chinese iyo Western dhafan, isbitaalka ayaa kooxda ugu awooda badan khubaro ah, waa wanaagsan at daaweynta kala duwan ee cudurrada, oo ay ku jiraan sonkorowga, atrophy muruqa, scleroderma, laabotooyinka, cudurada difaaca jirka, kansarka iyo wixii la mid ah .
Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan cudurka, ama haddii aad qabtid bukaanka sida, rabto in aad ogaato oo ku saabsan our daaweynta, aad rabto in aad imaaneysid isbitaalka si loogu daweeyo our, waad nala soo xiriiri kartaa iyo warbixin kormeer oo bukaan-socodka noo soo dir. Waxaan kaa caawin karaa inaad samayso ballamaha iyo wada tashi video khubaro.